Iphrinta ye-3D ye-Cake Printer Cake Printer China Manufacturer
Incazelo:Iphrinta ye-Cake Mp-415,Iphrinta yombala we-Cake,I-Cake Art Printer
Home > Imikhiqizo > Iphrinta yokudla > Iphrinta ye-Cake > Iphrinta ye-3D ye-Cake Printer Cake Printer
I-whole-purpose ikhekhe iphrinta mp-415 yisizukulwane esisha semishini yokunyathelisa yedijithali eliphezulu. Ingakwazi ukukhipha isithombe esicacile se-digital esinebalabala, esingenawo amanzi, elangeni, ukuphikisana nesibindi futhi akuzange kuphele. Isebenzisa uhlelo lokunikezwa kweyinki oluqhubekayo futhi oluzenzakalelayo. Sebenzisa kalula, phrinta ngokushesha, izindleko eziphansi futhi zisetshenziswe kabanzi. Iphrinta yethu ephathekayo ingaphrinta ezinhlobonhlobo ezinjengezintambo ezinjenge-t-shirt, insimbi, iplastiki, izinkuni, i-porcelain, ingilazi, i-PVC, itshe, i-bamboo, i-crystal, isikhumba, isakhiwo, isambatho, i-textile, i-academy board nokunye okunye.
Easy operationedible Thenga ikhekhe iphrinta inthanethi ngoyinki ezidliwayo wawenziwe Wayenyathelisa okuzenzela ukuphrinta kwezomnotho ikhanda, it is amakhastama entry level amakhasimende ezitolo zekhofi. Ukusebenza okulula, isivinini esiphakeme sokunyathelisa futhi
Iphrinta ye-Cake Mp-415 Iphrinta yombala we-Cake I-Cake Art Printer Iphrinta ye-Cake 2015 Iphrinta ye-Cake Iphrinta ye-Cake A3 Iphrinta ye-Cake Uae Iphrinta ye-Cake i-Asda